Asean-Dalana, ny Fitaterana-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Fitaterana an'habakabaka Asean
Namaly tamim-pahombiazana ny "fampandrosoana tandrefana" ny komity foibe CPC, "One Belt And One Road", SHL mavitrika ny manamboatra drafi-drafitra drafitra orinasa ary manomboka manome serivisy serivisy fitaterana làlana iraisampirenena mankany ASEAN (Association of Nations Asia Tenggara).
Ireto ny lalan'ny fitaterana làlana:
1. Pingxiang any Guangxi - Vietnam
2. Pingxiang any Guangxi - Vietnam - Kambodza / Thailand / Laos
3. Hekou any Yunnan- - lao Cai (Vietnam) - Vietnam
4. Ruili ao Yunnan - Myanmar
5. Boten ao Yunan-Laos
Inona avy ireo karazan'entana mifanentana amin'ny làlana iraisampirenena mankany ASEAN?
Fitaovana fitaterana herinaratra, milina injeniera, crane fiara, forklift, fitaovana fananganana, sakafo, zava-kanto ary asa-tanana isan-karazany, ny vatsy isan'andro dia mety ho an'ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany ASEAN.
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny fadin-tseranana, ny famindrana ny fomba amam-panao ary ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany ASEAN?
A. Ny fitaterana an-dalambe mankany ASEAN dia ny hanatanterahina ny fanambarana fanondranana araka ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara fitaterana vahiny sy ny fomba amam-panao ao an-toerana rehefa avy mitondra entana any amin'ny trano fitehirizam-bokatra.
B.Ny fitateram-pitaterana an-dalambe mankany ASEAN dia ambara any amin'ireo firenena eny an-dalana.
C.Ny fitaterana làlana ara-làlana mankany ASEAN dia azo ambara ao amin'ny seranan-tsoratry ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana na amin'ny toerana misy ny tetikasa.
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany ASEAN?
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna fametrahana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany ASEAN?